Alshabaab: Diyaarad ayaan jimcihii ku tooganay nawaaxiga Ceelbuur – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Alshabaab: Diyaarad ayaan jimcihii ku tooganay nawaaxiga Ceelbuur
Muqdisho – Mareeg.com: Al-shabaab ayaa sheegay iney gentaal la heleen diyaarad nuuca qumaatiga u kaca ah (Helicopter), taasoo u shaqeyneysay ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM, qeybta gobollada Dhexe.
Sheekh Cabdicasiis Abuu-Muscab oo ah afhayeenka howlgallada Alshabaab oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka Al-shabaab ayaa sheegay in weerararkani dhacay gellinkii dambe ee Jimcihii lasoo dhaafay, welina ay raadinayaa raqdii diyaaradda, sida uu yiri.
Abuu Muscab ayaa xusay in weerarka diyaaradan ay ku qaadeen uu ka dhacay degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. Waxaa warka Alshabaab soo baxay kadib markii wakaaladda wararka Interfax ee dalka Ruushku sheegtay in Soomaaliya lagu weeraray diyaarad dalkaas laga leeyahay oo la shaqeysan UN-ka.
“Waxaa u suuro-gashay Mujaahidiinta in gellinkii dambe ee Jimcihii ay gantaal la helaan diyaarad Helicopter ah oo maraysay nawaaxiga degmada Ceelbuur, taasoo sahayda u geyn jirtay, dhaawacyadana u qaadi jirtay ciidamada ku sugan Ceelbuur, Maxaas, Baldweyne iyo Buulo-burte” ayuu yiri Abuu Muscab.
Wuxuu sheegay Abuu Muscab in maalmihii tegay ay baadi goobayeen diyaaradaas, oo uu tilmaamay in markii la dhaawacay ay u cararta dhanka degmada Dhuusamareeb.
“Diyaaradaas maalmahaan baadi-goob ayaan ku haynay, welina ma aanan helin raadkeeda, laakiin waxaan xaqiijin karnaa iyadoo qiiqeysay iney u carartay dhinaca Dhuusamareeb,” ayuu sidoo kale yiri Abuu-Muscab.
Abuu Muscab ayaa toogashada diyaaradaas ku tilmaamay guul usoo hoyatay Alshabaab, isagoo xusay iney sii xoojiyaan go’doominta ay ku hayaan degmooyinkii ay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM kaga qabsadeen dagaalladii dhawaanahan dhacay.
“Meesha kaliya ee cadowga Afrikaanka u furneyd waxey aheyd diyaaradaha, markaan kadibna waan ku guuleysannay inaan toogano diyaaraddii ugu horreysay, kuwa dambana wixii aan hub heysano waan u diyaar gareysanay” ayuu yiri Abuu Muscab.
Warka kazoo baxay Alshabaab ayaa yimid kadib markii shalay warbaahintu tebisay war ay daabacday wakaaladda wararka Interfax ee dalka Ruuskha, taasoo sheegtay in Al-Shabaab ayaa gantaal ku weerareen diyaarad Helicopter ah oo laga leeyahay dalkaas, una kireysan Qaramada Midoobay, qeybteeda ka howlgasha Soomaaliya.
Ma jiro war kazoo baxay AMISOM iyo Qaramada Midoobay oo sugaya ama diidaya warka ay baahisay wakaaladda wararka Interfax ee Ruushka iyo sheegashada Alshabaab.
Baarlamanka oo meel mariyey hindise sharciyeedka Golaha Adeega Garsoorka